Arduino ကိုသုံးပြီး ဘာလုပ်နိုင်သလဲ? | Easydevboards
Home / Arduino / Basic Arduino / Arduino ကိုသုံးပြီး ဘာလုပ်နိုင်သလဲ?
Arduino ဆိုတာ Mircroprocessor စနစ်တစ်ခုပဲ။ Arduino ကို သုံးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ မီးသီးတွေ၊ မော်တာတွေ၊ မီးအားမြှင့်စက်တွေ၊ အိမ် တခါးတွေ စသဖြင့် မိမိထိန်းချုပ်လိုသော အရာတွေ၊ မိမိသိချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို Arduino ကို သုံးပြီး ရယူနိုင်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်နေပြီ။ Programming ရေးတဲ့ အခါမှာလည်း လွယ်ကူအောင် C Language စစ်စစ်ကို မသုံးပဲ၊ ပြန်လည် မွမ်းမံထားတဲ့ Arduino Programming Language ကို သုံးထားတဲ့ အတွက် အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်တာပေါ့။
Arduino Board တခုထဲ သုံးပြီး Project လေးတွေ တည်ဆောက်နိုင်သလို တခြား Circuit လေးတွေကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ၊ Arduino ကနေ GPS Module ကို ဆက်သွယ်ပြီး ရောက်နေတဲ့ နေရာကို ရယူနိုင်သလို၊ Arduino ကို သုံးပြီး စက်ရုပ်ကားလေးတွေတောင် တည်ဆောက်နိုင်တယ်လေ။
Arduino က DIY (Do It Yourself) ကိုယ်ကိုတိုင် Project လေးတွေလုပ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်လေ။ Arduino Software IDE ကလည်း အလကားရနိုင်သလို၊ Arduino ရဲ့ Circuit Design တွေ၊ PCB ရေးဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေ ကို လည်း Download လုပ်ယူနိုင်ပါသေးတယ်။ Anduino ဟာ Open-source License ဆိုတော့ လိုင်စင်ဖိုးပေးစရာမလို့ပဲ ကိုယ်လိုချင်တာကို စိတ်အေးလက်အေး ဖန်တီးယုံပေါ့။
Arduino Board တစ်ခု ဝယ်ယူခြင်း
Arduino Board ကို Arduino store ကနေ တိုက်ရိုက်မှာယူနိုင်သလို www.easydevboards.com ကလဲ ဝယ်နိုင်တယ်လေ။
Arduino Software ဒေါင်းလုပ် လုပ်ခြင်း။
Arduino Software ကို ဒီနေရာမှာ လည်း ဒေါင်းနိုင်တယ်လေ။ Windows, Mac OS, and Linux စနစ်အားလုံးမှာ အလုပ်လုပ်တော့ ကြိုက်တဲ့ OS မှာ စမ်းနိုင်တာပေါ့။
ကဲ ဒီနေ့ပဲ Arduino Project လေးတွေ စလိုက်ကြဆို့နော်။
အခက်အခဲရှိရင် easydevboards@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကူအညီ တောင်းခံနိုင်တယ်လေ။ ကူညီပြီး ဖြေရှင်းပေးမှာပေါ့။